လက်က အနာက မခံနိုင်အောင် ယားလွန်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြရာမှ ဆရာဝန်က ရေသောက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ - Zet Star
လက်က အနာက မခံနိုင်အောင် ယားလွန်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြရာမှ ဆရာဝန်က ရေသောက်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ
အဲ့ဒီနေ့တော့ တော်တော်ကိုအမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ ဆေးခန်းမှာ လူနာရှုပ်တဲ့နေ့၊ လူနာများတာ မဟုတ်ဘူး…။ လာတဲ့လူနာတွေလည်း ကြည့်လိုက်ဦး၊ ဆိုင်ကယ်မှောက်တဲ့ လူနာက ၂ ယောက်။ တစ်ယောက်အနာက ကြီးတော့ ချုပ်ပေးရမှာ။ ခေါင်းပေါ်သစ်သားချောင်းပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းပေါက်တဲ့ လက်သမားဆရာက တစ်ယောက်၊ သူလည်းချုပ်ရမှာပဲ။ အိမ်အောက်မှာက နှလုံးရောဂါနှင့် အမေကြီးကို အောက်ဆီဂျင် ပေးထားရတယ်။ ခေါင်းချုပ်နေတုန်းမှာပဲ အဲ့လူနာရောက်လာတာ ကိုယ်လည်းချုပ်ရင်းနှင့်ပဲ မေးရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဦးလေး ထွေထွေထူးထူးတော့ ဟုတ်ပါဘူး လက်ကအနာလေး လာပြတာပါ ဆရာလေး…. အနာက ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း၊ ဖြစ်တာရော ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျ ယားလို့ကုတ်တာကနေ စပြီးဖြစ်သွားတာပါ ၂ ပတ်လောက်တော့ရှိပြီ ဆရာလေးရေ အခုမှပိုဆိုးလာလို့ လာပြတာပါ။ အနာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟုတ်ပါ့ဗျာ အသားနီလန်အောင်ကို ကုတ်ထားတာ အဆီတဝင်းဝင်းကို ဖြစ်နေတယ်။
တော်တော်ယားသလားဗျ… ယားတာတော့မပြောပါနဲ့တော့ ကုတ်ထားတာသာကြည့်ပါတော့ ဆရာလေး အမာရွတ်လေးက စယားပြီး ကုတ်ရင်းကုတ်ရင်း ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါဗျာ နောက်ကော ဘာဖြစ်သေးလဲ၊ ဘာလိုခံစားရသေးလဲ လူကြီးက နူံးနေတယ်ဆရာ၊မနေ့ညကလည်း ရေသောက်တာ နင်နေတယ် ဘယ်လိုမှသောက်မရဘူး…. ဘယ်လို ရေနင်တယ် ဟုတ်လား….?
ဒါနဲ့ သူနှင့်ပါလာတဲ့ သူ့သမီးကို မုန့်သွားဝယ်ခိုင်းပြီး လူနာကို မုန့်စားခိုင်းကြည့်တော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ရေသောက်ခိုင်းတော့မှ စတော့တာပဲ… ရေခွက်ကိုယူပြီး ပါးစပ်ကိုတေ့တဲ့ အချိန်အထိ အကောင်းပဲ၊ ရေဝင်တော့မှ ဖူးဖူးဆိုပြီး မှုတ်ထုတ်တယ်၊ ရေခွက်ကလွတ်ကျသွားတယ်။ လူကြည့်လိုက်တော့ ဝေဒနာတစ်ခုခုကို ခံစားလိုက်ရသလို ဖြစ်သွားတာကို တွေ့ရတယ်…။
ကျွန်တော်သတ်လိုက်တာပါ၊ ကျွန်တော့ကို ပြန်ကိုက်လို့ သတ်လိုက်တာပါ၊ စိတ်ဆိုးပြီးသာ သတ်လိုက်ရတယ်၊ ရင်ထဲတော့မကောင်းဘူး။ အရမ်းလိမ္မာတဲ့ခွေးလေး၊ အရင်ကဆို ဘာလုပ်လုပ် ပြန်မကိုက်တဲ့ခွေး အခုနေမကောင်းတော့ စိတ်မကြည့်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာ….
သေချာပြီ ခွေးရူးပြန်ရောဂါပဲ။ ယားတယ်၊ လူနူံးတယ်၊ အသိသာဆုံးအချက်ကတော့ ရေကြောက်တာပဲ။ ဒါနဲ့ လူနာသားသမီးတွေကို ပြောရတယ်။ လူနာက ဆေးထိုးစရာ မလိုပါဘူး။ သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးဆိုရပါတယ် ။ဦးလေး အိမ်ပြန်နှင့် ကျွန်တော် သူတို့ကို ဆေးပေးလိုက်မယ်၊ လိမ်းဆေးကတော့ ဝယ်ရမှာ…
ဒါနဲ့ သူတို့ပြန်သွားကြတယ်။ ဆေးခန်းကို သူတို့လာတုန်းက မနက် ၁၀နာရီ သာသာလောက်ပဲရှိသေးတာ နေ့လည် ၁နာရီလောက်ကျတော့ လူနာကစပြီးဖောက်လာလို့ ဆေးရုံသွားကြပါတယ်။ ဆေးရုံကလည်း ဒါခွေးရူးပြန်တာ၊ ကုလို့တော့ မရတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့် လူနာစောင့်တွေက ဝိုင်းတောင်းဆိုမှုကြောင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါကုသဆေး တစ်လုံးတော့ ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့သူတို့ အိမ်ပြန်လာတယ်။ ညနေ၅နာရီမှာ လူနာဆုံးပါတယ်….အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရောဂါပါ။
အကယ်၍ ခွေးအကိုက်ခံရလျှင် ခွေးကို မသတ်ပါနဲ့ ၊ခွေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခွေးကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏရာကို ရေများများနှင့် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဆေးပါ၊ ဆပ်ပြာသုံးစွဲနိူင်ပါတယ်။ ရေဆေးပြီး အရက်ပြန်ဖြင့် သန့်စင်ပါ၊ပြီးရင် tincture of iodine နှင့်ထပ်မံ သန့်စင်ပါ၊ နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံးသွားပါ။
ခွေးကိုက်ခံရတဲ့ ဒဏ်ရာကို အဆင့် ၃ ဆင့် ခွဲပါတယ်။
အဆင့် ၁ ထိတွေ့ရုံ၊ အရေပြားအကောင်းပေါ်ကို လျှာဖြင့်အလျက်ခံရခြင်း။ အဆင့်၂ အကိုက်မခံသော်လည်း ငုံခဲခံရခြင်း၊ သွေးမထွက်ဘဲ ပွန်းရာခြစ်ရာရှိခြင်း။ အဆင့်၃ အရေပြားပေါက်ပြဲပြီး သွေးထွက်အောင် အကိုက်ခံရ၊ အကုတ်ခံရခြင်း၊ အနာပေါ်ကို လျှာဖြင့်အလျက်ခံရခြင်း။
အဆင့် ၁ အတွက်ကတော့ ခွေးမရူးကြောင်းသေချာသိလျှင် ကုသရန်မလိုပါဘူး။
အဆင့် ၂ အတွက်မှာတော့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (eg verorab,ravibar) ထိုးဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရာမှာ နှစ်နည်းရှိပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ အကိုက်ခံရခြင်း တစ်လုံးထိုး၊ နောက် ၃ ရက်မြောက်မှာ တစ်လုံး၊နောက် ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး၊ နောက် ၁၄ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး၊ နောက် ၂၈ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး စုစုပေါင်း ၅ လုံးထိုးရပါမယ်။
နောက်တစ်နည်းက စစခြင်း ကာကွယ်ဆေး ၂လုံး ကို တစ်ခါတည်း ထိုးရပါမယ်။ နောက် ၇ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး၊ နောက် ၂၁ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး စုစုပေါင်း ဆေး ၄ လုံးထိုးရပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့နည်းနှင့် ထိုးလို့ရပါတယ်။ လူကြီးဆိုရင် လက်မောင်း၊ ကလေးဆိုရင် ပေါင်အရှေ့ဘက်ထိုးရပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးနေတုန်း ခွေးမရူးကြောင်း သေချာသိရင် ဆေးထိုးတာကို ရပ်ချင်ပါက ရပ်နိူင်ပါတယ်။
အဆင့် ၃ အတွက်ကတော့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးရော၊ ကုသဆေး(RIG) (eg favirab,equirab) ပါ ထိုးဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးကတော့ အဆင့် ၂ အတိုင်းက လိုပါပဲ။ ကုသဆေးကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် တွက်ပြီးမှ ထိုးရပါတယ်။ human RIG ဆိုရင် 20IU/kg of body weightပါ၊ Equine RIG ဆိုရင် 40IU/kg of body weight ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူကြီးဆို ဆေးနှစ်လုံး၊ ကလေးဆို ဆေးတစ်လုံး ကုန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးကို ဒဏ်အတွင်းနှင့် ဒဏ်ရာပတ်လည်ကို ထိုးရပါတယ်။ ပိုတဲ့ဆေးတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ နေရာနှင့် ဝေးတဲ့နေရာမှာ အသားဆေးထိုးရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ နေရာ ဆန့်ကျင်ဖက်မှာထိုးရမှာပါ။
အရင်က ကာကွယ်ဆေး အပြည့်ထိုးဖူးတဲ့သူများ ခွေးပြန်အကိုက်ခံရပါက ကာကွယ်ဆေးပဲ ပြန်ထိုးဖို့ လိုအပ်ပါတော့တယ်။ အကိုက်ခံရခြင်း တစ်လုံး၊ နောက် ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်လုံး စုစုပေါင်း ၂ လုံးပဲထိုးရတော့မှာပါ။
ဆေးတွေ အားလုံးရဲ့ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးက အများသောအားဖြင့် ၁ သိန်းနီးပါးပဲကျပါတယ်။ ကလေးဆို ၆ သောင်း၊ ၇ သောင်းပါ။ ကျွန်တော့ ဆရာတွေပြောသလိုပဲ ခွေးရူးပြန်ရောဂါဆိုတာ ခွေးအကိုက်ခံရတာနဲ့ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထား၊ မဟုတ်ရင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ ရာနှုန်းပြည့်သေပါတယ်၊ ကုသလို့မရသေးပါဘူးတဲ့ ဒါကြောင့် ခွေးအကိုက်ခံရပါက ငွေ ၁သိန်း ကိုမမြင်ကြဘဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…..
← မြန်မာတွေ စားနေကြတဲ့ ဒံပေါက်ရဲ့ မူလမိခင်နိုင်ငံ (သင်ထင်ထားတာနဲ့ လွဲနေပါလိမ့်မယ်)
ဖားကန့်မှာ မြေစာပုံပြိုကျလို့ လူတွေ သေကြပြန်ပြီ (အသက် ၁၇ နှစ် လူငယ်လေးတယောက် ပါသွားပါတယ်) →